Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada » Mataanno uu Halleelay Xannuun ku Keenay in ay Cunto ka Dhigtaan Qururuxa, Ciidda iyo Waraaqaha.
Laba haween ah oo mataanno ah, kuwaasoo ku nool magaalada Bradford ee dalka Ingiriiska, ayaa uu ku dhacay xannuun la yidhaa Pica, kaasoo ku keenay in ay dabeecad u yeeshaan cunista qururuxa, ciidda, waraaqaha buuggaagta iyo waxyaabo wasakh ah oo aan nafaqo lahayn.
Labadan mataanood oo la kala yidhaa Adele iyo Anita oo 50 jir ah waxa ku dhacay xannuunkan oo ku keenay in ay cunaan waxyaabaha aan nafaqada lahayn amma aan cunto u noqonayn.
Mataan Adele waxay dhibaatadan ku bilaabantay markii ay carruurta ahayd, waqtigana waxay maalin kasta cunta hal iin oo xaydha gawaadhiga ah, halka dadka caadiga ah ka cunaan macmacaanka (chocolate).
“Markii aan 8 jirka ahaa amma 9 jirka waxaan bilaabay in aan diirto shamaca la shito, kadibna waxaan bilaabay inaan cuno waraaqaha buggaagta,” ayey tidhi Adele oo warraysi siisay Telefiishanka ITV’s.
Shamacdayada la shito ee ay cunaysay intay jirtay ilaa hadda wax dhibaato caafimaad darro ah kumay keenin, waxaanay tidhi; “Cunista shamaca la shito waxa uu iga dhiga mid aad u degen neerfis ahaan, shamaca kaliya waxaan haysta toddobaad, sababtoo ah in yar oo iinj amma laba ah baan ka cunaa si aanay dadku u arag.”
Sidoo kale, walaasheed Anita oo ay mataano yihiin xaaladan waxa ku dhacday waqti dambe, gaar ahaan 24 sanno ka hor, waqtigaas oo ay uur lahayd, iyadoo sharaxaysana waxay tidhi; “Waxaan bilaabay inaan shayda qaar cuno, sida tigidhada gaboobay ee basaska lagu raaco, xataa waxaan cuna buuggaagta gaboobay waraaqahooda, mana awooddo in aan iska joojiyo caadadaas, sababtoo ah buuggaagta raagay waxay ii dhadhamaan macaan, aadna waan u jeclahay, waana sidii oo aan macmacaanka jukulaatada (Chocolate) cunaayo.”